Iintloko kunye nemisila phakathi kwabakhi bemarike yemasheya yaseSpain | Ezezimali
Ezona nkampani zibalulekileyo zokwakha eSpain, eziyinxalenye yesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, zibhalisile kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo ukwanda kwexabiso lentengiso ngaphezulu kwe-500 yezigidi zeerandi. Ukongeza, ezinye ezidweliswe ngaphandle kwesi salathisi nazo zinike uphononongo ekufuneka lubekwe njengolunomdla kakhulu kwizicwangciso zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuba lelinye lawona macandelo abonisa ukulingana ukwenza ungeniso olukhethiweyo kwizikhundla zabo.
Kodwa musa ukudideka kukhetho lwakho kuba ukwahluka phakathi kweenkampani kwicandelo lezitena kukhulu kakhulu. Asizizo zonke ezinexabiso elifanayo kwaye ngelixa ezinye zikhetha ukuthengwa okucacileyo kwabanye esona sigqibo sihle kukungabikho kwizikhundla zabo. Kwaye ukuba ithengiwe, ayizukukhetha ngaphandle kokwenza intengiso efanelekileyo, inxenye okanye iyonke. Akumangalisi ke ukuba, licandelo lezoqoqosho elinezinto ezohlukeneyo kwaye ayizizo zonke izinto ezikhuselekileyo ezithi zenze imeko ezifanayo kuhlalutyo lobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwimbono yeziseko zazo.
Ukusuka kolu luvo ngokubanzi, kuluncedo kakhulu ukugxininisa ukuba ayizizo zonke ixabiso leenkampani zokwakha zaseSpain ezineempawu ezifanayo. Akukho kuncinci, njengoko uya kuba nakho ukuqinisekisa ukusuka ngoku ukuya phambili. Kukho ukhuseleko olunokuthengwa, kodwa ngokuchaseneyo kwenzeka kwabanye. Kuyimfuneko ukwazi ifayile ye imeko yokwenyani Eli candelo libalulekileyo loqoqosho lwaseSpain. Ukuze ukusukela ngoku uye uphuhle ipotifoliyo enengqondo kwaye elungeleleneyo eya kukwenza ukuba ukonga kwakho kunenzuzo kula maxesha.
1 I-ACS: oyithandayo izabelo
2 I-Acciona, isiciko secandelo
3 I-Ferrovial, ngolindelo olukhulu
4 Umnqamlezo kwiinkampani zokwakha zaseSpain
5 USacyr ubuthathaka kakhulu kwimarike yemasheya
6 I-FCC kumhlaba womntu
I-ACS: oyithandayo izabelo
Ukuthengiswa kweQela le-ACS kwiinyanga ezilithoba zokuqala zonyaka kufikelele kwi-27.091 yezigidi zeerandi, ezimele a 5,2% kunye ne-11,4% inyukile ngokwentelekiso, oko kukuthi, ngaphandle kokujonga umahluko kumanqanaba otshintshiselwano achukunyiswe luxabiso lwe-euro xa kuthelekiswa nezinye iimali kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo. Olu luvo lulungileyo lwayo yonke imisebenzi luxhaswa ikakhulu kukukhula kweemarike zaseNyakatho Melika, Australia naseSpain.
Ulwabiwo lwejografi yentengiso lubonisa ububanzi ukwahluka kweqela, apho uMntla Melika umele iipesenti ezingama-45 zentengiso, iYurophu ezingama-21%, i-Australia iipesenti ezili-19, i-Asiya ngama-8%, uMzantsi Merika ama-6% ne-Afrika i-1% eseleyo. Ukuthengisa eSpain akhawunti ye-14% yentengiso iyonke. Ngayiphi na imeko, ixabiso lezabelo zalo lenziwe ngendlela ecacileyo yokunyuka ukuya kwinqanaba lokuba lelinye lamaxabiso esitokhwe anomtsalane ukuvula izikhundla ukusukela ngoku. Ngengcebiso yokuthenga kuninzi lwabahlalutyi bemarike yezabelo.
I-Acciona, isiciko secandelo
Emva kwenkampani kaFlorentino Pérez, u-Acciona ugqame ngokuba yinkampani yesibini kuyo ngaphezulu inyuse imali yayo yentengiso kwiinyanga ezidlulileyo. Kwaye inokubaluleka kokuphononongwa kwakhona nangayiphi na imeko ngaphezulu kwezinye iinkampani ezidwelisiweyo kwicandelo lazo. Akunakulityalwa ukuba lelinye lamaxabiso acetyiswayo ngabahlalutyi bezabelo zaseSpain. Kwimeko ecacileyo enokukhokelela ekubeni ufezekise iindawo eziphakamileyo ngakumbi ukusuka ngoku.
Kwelinye icala, iAcciona yindawo yokutshintshiselana ngemasheya efikelele kwisivumelwano ukuze unike amandla ahlaziyekayo ukuya kwiTelefonica kulo nyaka ukhoyo. Ngale ndlela, ikhontrakthi iqikelela umthamo we-345 GWh, oya kuthi uthintele ukukhutshwa kweetoni ezingama-107.000 ze-CO2. Ngeli xesha, unikezelo lumele i-23% yombane osetyenzisiweyo kwi-T Telefonica kunye ne-58% yemfuno yayo kumandla ombane aphezulu. I-Acciona idibanisa ishishini layo lokuthengisa amandla kubathengi abakhulu eSpain nasePortugal, eyafikelela kwi-5.900 GWh kwi-2018, ukwanda nge-11%.
I-Ferrovial, ngolindelo olukhulu
Enye yeenkampani zokwakha ezihamba ngexesha elingcono lelilikhokelwe nguRafael del Pino, kwaye ngokoluvo lwabahlalutyi bezemali amandla aphezulu kufutshane nama-20% amanqanaba. Okwangoku kuphuhlisa imeko engenakubekeka phezulu enokwenza ukuba eli xabiso linomdla kakhulu ukuba ube kwiphothifoliyo yotyalo-mali kwixesha elifutshane neliphakathi. Apho abatyali mali abancinci nabaphakathi banokufumana ngaphezulu kunelahleko.
Kule meko ngokubanzi, inkampani yokwakha yaseSpain inikwe i ukwandiswa nokwakhiwa ngokutsha ye-6,7 yeekhilomitha (10,3-yeekhilomitha) ye-IH 35, eWaco, Texas, nge- $ 341 yezigidi, elingana ne- $ 297 yezigidi. Ikhontrakthi lelona bhaso likhulu kwimbali kaWebber. Apho, iprojekthi ikwabandakanya ukwenziwa kweebhlorho ezingama-22. Imisebenzi, eya kuqala entwasahlobo ka-2019, inexesha lokugqitywa kweenyanga ezingama-46.
Umnqamlezo kwiinkampani zokwakha zaseSpain
Ayizizo zonke iindaba ezilungileyo zeli candelo lichaphazelekayo. Kungenxa yokuba, kukho inani leenkampani ezizisa ngefayile ye- imeko ebuthathaka kakhulu kwaye oko kunokubakhokelela ekunciphiseni ixabiso kwiimarike zezemali ukususela ngoku. Le yimeko ethile ye-OHL, engekayeki ukuthengisa okunamandla. Ngothotho lweenkqubo kunye neziganeko ezingancediyo ekufumaneni ukuthembakala kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho kukho umngcipheko omkhulu wokuphulukana nee-euro ezininzi kwizikhundla zabo.
Konke oku ngaphandle kwenyani yokuba i-OHL yongeze izivumelwano ezintsha eMelika ngaphezulu kwe-130 yezigidi zeerandi. Ngale ndlela, kufanele ukuba icaciswe ukuba inkampani yokwakha i-Villar Mir ibikhona e-US ukusukela ngo-2006 kwaye ngoku isebenza kumazwe alithoba -Florida, New York, New Jersey, Texas, California, California, Illinois, Connecticut, Virginia kunye neMassachusetts- kunye iSithili saseColumbia. Kodwa akubonakali ngathi olu hlobo lweendaba lukhulisa ukuhambelana kwamaxabiso alo. Kule meko, imeko yayo kuhlalutyo lobuchwephesha iyehla kuwo onke amaxesha okusisigxina: amafutshane, aphakathi kunye made. Ngomyalelo wokuthengisa kubatyali mali abathathe izikhundla kweli xabiso lemarike.
USacyr ubuthathaka kakhulu kwimarike yemasheya
Into efanayo yile yenzekayo kuSacyr, inkampani engaphandle kwesalathiso esikhethiweyo esiphulukene namandla amaninzi kule minyaka idlulileyo. Imkile ekubeni yenye yeenkampani ezikhokelayo kwicandelo lezokwakha iye kwenye yezo zine ubuchwephesha obuthathaka yabo bonke. Ngokukodwa, ekubeni ishiye iphothifoliyo ye-Ibex 35. Ewe kunjalo, ayiboneleli ngemida yokuzithemba enokuthi ibe yinto yotyalo-mali ngabagcini. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuyinzuzo ngakumbi ukuhlala ecaleni kwimisebenzi yakho.
Ngokunxulumene nembasa eyazisiweyo izolo yi-International Chamber of Commerce (ICC) yaseMiami, uSacyr uyicacisile imeko yayo malunga nenkqubela phambili Canama Canal. Apho icacisa khona ukuba ihambile kwiimfanelo zayo ezihambelana neli bhaso. Isivumelwano phakathi kwe-GUPC kunye ne-ACP simisele umhla kaJuni 2018 wokuhlawulwa kwenkqubela phambili. I-GUPC nangona kunjalo icele ulamlo ukuba luhambe kunye nokubuyiswa kwenkqubela phambili kwisisombululo solamlo lobuchwephesha. Ngayiphi na imeko, ukuthotyelwa kwebhaso nguSacyr akuyi kuba nasiphumo kwingxelo yengeniso okanye kumgaqo-nkqubo womvuzo wabanini zabelo.
I-FCC kumhlaba womntu
Le nkampani yokwakha, kwelinye icala, ikwimeko ye-anodyne engapheliyo ekuzichazeni. Ayothusi into yokuba iye yabhaptizwa kwisitishi sokungqinelana esingaguqukiyo kwiinyanga ezidlulileyo. Ukungabi lolunye lolona khetho lufanelekileyo lokuthatha izikhundla ngaphakathi kweli candelo libalulekileyo leshishini. Ngokuchasene noko, imisebenzi yorhwebo yeyona nto ibuthathaka ukuze ukonga kwenziwe ingeniso ukusukela ngoku. Ingakumbi kuba yenye yezona ndawo zithengisa kakhulu kwaye ke ngenxa yoko ayijolisiswanga kwiprofayili yabatyali abazikhuselayo.
Enye yeendaba ezichaphazelekayo ezivela kwiCCC kukuba ibandakanyiwe kwisalathiso sesitokhwe sokuzinza Isalathiso esihle seFTSE4, elungiselelwe rhoqo kwiinyanga ezintandathu ukuqaqambisa ukusebenza kweenkampani ezibonisa iindlela ezizizo kwimicimbi yezendalo, yezentlalo nolawulo lwamashishini (ESG). Esi salathisi sinokusetyenziswa zintlobo ntlobo zabathathi-nxaxheba kwimarike ekwenzeni izigqibo ezizinzileyo zotyalo-mali.
Njengoko unokubona kweli nqaku, kwicandelo lokwakha kukho yonke into, elungileyo nengalunganga. Kwelinye lamacandelo anxulumene kakhulu nemijikelezo yezoqoqosho kwaye esi sesinye sezizathu zokuxhalaba xa kujongana nokudodobala koqoqosho lwamazwe aphesheya kwaye kunjalo nelizwe. Ngomngcipheko ocacileyo wokuba amaxabiso ezabelo zawo anokuhla kule meko yokudibana. Ingakumbi kuba yenye yezona ndawo zithengisa kakhulu kwaye ke ngenxa yoko ayijolisiswanga kwiprofayili yabatyali abazikhuselayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iintloko kunye nemisila phakathi kwabakhi bemarike yemasheya yaseSpain